China Hot rolled steel plate စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ |Star Good Steel
ကုသိုလ်ကံ လိပ်ထားသော စတီးပြား/စာရွက်
နိဒါန်း ကုန်ကြမ်းအဖြစ် စဉ်ဆက်မပြတ် သွန်းလုပ်ထားသည့် ပြားပြား သို့မဟုတ် ပွင့်နေသော ပြားပြားကို အသုံးပြု၍ လမ်းလျှောက်အပူပေးသည့် မီးဖိုဖြင့် အပူပေးကာ ဖိအားမြင့်ရေကို အတိုင်းအတာဖြင့် ဖယ်ရှားပြီးနောက် ကြမ်းတမ်းသော လှိမ့်စက်ထဲသို့ ရောက်ရှိလာသည်။ကြမ်းတမ်းသောလှိမ့်ပစ္စည်းသည် ဦးခေါင်း၊ အမြီးကိုဖြတ်တောက်ပြီး ကွန်ပျူတာဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသော လှိမ့်ရန်အတွက် ပြီးပြည့်စုံသော လှိမ့်စက်ထဲသို့ ရောက်သွားပါသည်။နောက်ဆုံး လှိမ့်ပြီးနောက်၊ ၎င်းသည် laminar cooling (ကွန်ပြူတာဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသော အအေးနှုန်း) ကို ခံယူပြီး ဖြောင့်ဆံကေသာ ကွိုင်ဖြစ်လာစေရန် ကွိုင်ဖြင့် ကွိုင်ဖြင့် ပတ်ထားသည်။ဖြောင့်သောဆံပင်ကောက်စက်များ၏ ဦးခေါင်းနှင့်အမြီးသည် မကြာခဏဆိုသလို လျှာပုံသဏ္ဍာန်ရှိပြီး ငါးမြီးပုံသဏ္ဍာန်ရှိပြီး အထူနှင့် အနံတိကျမှု ညံ့ဖျင်းပြီး အနားစွန်းများသည် လှိုင်းပုံသဏ္ဍာန်၊ ဟမ်းနှင့်မျှော်စင်ပုံသဏ္ဍာန်ကဲ့သို့သော ချို့ယွင်းချက်များရှိတတ်သည်။ကွိုင်အလေးချိန်က ပိုလေးပြီး သံမဏိကွိုင်၏အတွင်းပိုင်းအချင်းမှာ 760 မီလီမီတာဖြစ်သည်။ဆံပင်ဖြောင့်သော ကွိုင်ကို ခေါင်းဖြတ်ခြင်း၊ အမြီးဖြတ်ခြင်း၊ အစွန်းများဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ဘက်စုံဖြောင့်ခြင်း နှင့် အဆင့်ညှိခြင်းကဲ့သို့သော အချောလိုင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ပြီးနောက် ၎င်းကို ဖြတ်တောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်ဆံထုံး ပြုလုပ်ခြင်း- လိပ်ထားသော စတီးပြား၊ ပြားချပ်ချပ်ပူလှိမ့်ထားသော သံမဏိကွိုင်၊ အရှည်လိုက် တိပ်ဖြတ်ခြင်းနှင့် အခြားထုတ်ကုန်များ။အောက်ဆိုဒ်စကေးကို ဖယ်ရှားပြီး ဆီဖြင့် ပတ်ထားသော ပူလိပ်ချောကွိုင်ကို ချဉ်ပါက၊ ၎င်းသည် လှိမ့်ထားသော ချဉ်သောကွိုင်ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။ဤထုတ်ကုန်သည် အအေးခံစာရွက်ကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအစားထိုးရန် သဘောထားရှိပြီး စျေးနှုန်းမှာ အလယ်အလတ်ရှိပြီး သုံးစွဲသူအများစုမှ အလွန်နှစ်သက်ကြသည်။ပျော့ပျောင်းကောင်းမွန်ပြီး အအေးခံထားသော စာရွက်သည် မာကျောပြီး လုပ်ဆောင်ရအတော်လေးခက်ခဲသော်လည်း ပုံပျက်ရန်မလွယ်ကူသလို ခိုင်ခံ့မှုလည်း မြင့်မားသည်။လိပ်ပန်းကန်၏ ခိုင်ခံ့မှုအတော်လေးနည်းပြီး မျက်နှာပြင်အရည်အသွေး ညံ့ဖျင်းသည် (ဓာတ်တိုးခြင်း\_အချောထည်) ညံ့ဖျင်းသော်လည်း ပလတ်စတစ်သည် ကောင်းမွန်သည်၊ ယေဘုယျအားဖြင့် အလတ်နှင့်အထူပြားများ၊ အအေးခံပြားများ- ခိုင်ခံ့မှုမြင့်မားသော မာကျောမှု၊ မျက်နှာပြင်မြင့် အချောထည်၊ ယေဘုယျအားဖြင့် ပါးလွှာသော ပြားများကို ထုထည်အသုံးပြုထားသော ဘုတ်ပြားအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။အပူလှိမ့်ထားသော သံမဏိပြားသည် အအေးခံခြင်းထက် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ နိမ့်ပါးပြီး အတုလုပ်ခြင်းထက် နိမ့်ကျသော်လည်း ၎င်းသည် ခိုင်မာမှုနှင့် ပျော့ပျောင်းမှု ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။
ပစ္စည်း A53၊ A283-D၊ A135-A၊ A53-A၊ A106-A၊ A179-C၊ A214-C၊ A192၊ A226၊ A315-B၊ A53-B၊ A106-B၊ A178-C၊ A210-A- 1၊ A210-C၊ A333-1.6၊ A333-7.9၊ A333-3.4၊ A333-8၊ A334-8၊ A335-P1၊ A369-FP1၊ A250-T1၊ A209-T1၊ A335-P2၊ A369-FP၊ A199-T11၊ A213-T11၊ A335-P22၊ A369-FP22၊ A199-T22၊ A213-T22၊ A213-T5၊ A335-P9၊ A369-FP9၊ A199-T9၊ A213-M615၊523 150M19၊ 527A19၊ 530A30 စသည်တို့
Q345၊ Q345A၊ Q345B၊ Q345C၊ Q345D၊ Q345E၊ Q235B၊ HC340LA၊ HC380LA၊ HC420LA၊ B340LA၊ B410LA၊ 15CRMO၊ 12Cr1MoV၊ 20CR67509၊
အပေါ်ယံ သင့်လိုအပ်ချက်အရ သန့်ရှင်းမှု၊ အပြီးသတ်၊ ဗုံးခွဲခြင်းနှင့် ဆေးသုတ်ခြင်း။
လျှောက်လွှာ အမျိုးအစားများနှင့် အသုံးပြုမှုများ-
သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံ အစိတ်အပိုင်းများ၊ တံတားများ၊ သင်္ဘောများနှင့် မော်တော်ယာဉ်များ ထုတ်လုပ်မှုတွင် အဓိကအသုံးပြုသည်။
အထူးဒြပ်စင်များ (P၊ Cu၊ C စသည်ဖြင့်) ပေါင်းထည့်ခြင်းသည် ကွန်တိန်နာများနှင့် အထူးယာဉ်များထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုပြီး အဆောက်အဦအဆောက်အဦများတွင်လည်း အသုံးပြုသည်။
မော်တော်ကား FRAME၊ WHEEL စသည်တို့ကို ထုတ်လုပ်ရာတွင် ကောင်းမွန်သော ထုထည်နှင့် ဂဟေဆက်ခြင်း ဂုဏ်သတ္တိရှိသော ခိုင်ခံ့မြင့်သော သံမဏိပြားများကို အသုံးပြုပါသည်။
4. ပူလှသော အထူးသံမဏိ
ကာဗွန်သံမဏိ၊ သတ္တုစပ်သံမဏိနှင့် ယေဘူယျစက်မှုဖွဲ့စည်းပုံအတွက် တူးလ်သံမဏိတို့ကို အပူကုသမှုပြီးနောက် အမျိုးမျိုးသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည်။
5. အအေးခံထားသော မူရင်းပန်းကန်ပြား
CR၊ GI၊ ရောင်စုံစာရွက်များ စသည်တို့အပါအဝင် အမျိုးမျိုးသော အအေးခံ ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ရန် အသုံးပြုသည်။
၎င်းသည် ကောင်းမွန်သော စီမံဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဖိသိပ်အားကောင်းပြီး LPG၊ acetylene ဓာတ်ငွေ့နှင့် 500L ထက်နည်းသော အတွင်းပိုင်းပမာဏရှိသော ဓာတ်ငွေ့များဖြည့်ထားသော ဖိအားမြင့်ဓာတ်ငွေ့ဖိအားရေယာဉ်များကို ထုတ်လုပ်ရန် အသုံးပြုပါသည်။
8. Stainless steel ပန်းကန်
Stainless Steel သည် ကောင်းမွန်သော သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အစားအသောက်လုပ်ငန်း၊ ခွဲစိတ်ခန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ အာကာသယာဉ်၊ ရေနံနှင့် ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းများတွင် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။
Hot Rolled Steel Plate ၊
Hot Rolled Steel Plate စက်ရုံ၊
Hot Rolled Steel Sheet ၊
ကွိုင်ထဲတွင် ပူနေသော သံမဏိစာရွက်